Maamulka degmooyinka iyo goboladda oo doonayo in isbadal lugu sameeyo hanaanka dhalinyarada soo galootiga ah | Somaliska
Maamulka degmooyinka iyo goboladda oo doonayo in isbadal lugu sameeyo hanaanka dhalinyarada soo galootiga ah
Maamulka degmoyinka iyo goboladda dalka Iswiidhan ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano SKL, ayaa doonaya in wax laga badalo nidaamkii hore ee gunnadda loogu siin jirtay soo galootiga cusub gaar ahaan dhalinyaradda.
Maamulka ayaa doonaya in dhalinyaradda da’doodu u dhaxeey 18 ilaa 20 sanno dhalinyarada ay heesan karayaan kaar ardaynimo oo suuragal ka dhigaya in aay dhameeystirtaan muddadaas dugsiga sare si uu hello aqoonta suuqa shaqada doonayo islamarkaana aan laga gooneyn gunaddii xafiiska shaqada siin jiray.
Maamulka ayaa sidoo kale hinsadhooda ku doonaya in marka dhalinyaradu dhameeysato waxbarashadooda muddo lix sanno gudahood ay aqoontoodu tahay mid suuqa shaqada ka shaqeeya oo horey ka hela shaqo.
Maanta dadka soo galootiga ah ayaa marka ay dhameeystaan mudada labada sanno ah waxaa lugu qasbaa ineey aadaan koorasyo ay gunno ku helaan ama deyn ay qaataan si ay u maareeyaan noloshoda. Taasina waxeey keentay in dadku ay heylaan shaqooyin ku meel gaar ah oo aan dabooli karin baahidooda dhaqaale. Maamulka ayaa hindisahan u arka mid wax ku ool ah oo mustabalka wax looga qabanayo suuqa shaqada.
Ra’iisal wasaare Lövfen oo la kulmay madaxweynaha dalka Faransiiska
Mid ka mid ah urruradda soomaalida ee Göteborg oo laga yaabo in loo diro inkasso
Laanta Shaqaalaynta oo la wareegeysa isdhexgalka
Leyla Cali Cilmi: Siyaasiyad soomaaliyeed oo u sharaxan baarlamaanka dalka Iswiidhan